Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan iPad
1-Guji Phone in Transfer Phone
Ka Computer Bedelka Music inay iPad / iPad mini leh oo aan Lugood Read More >>
Sidee si ay u gudbiyaan MP3 in iPad la / aan Lugood nidaameed
Ma doonaysaa in lagu wareejiyo MP3 in iPad, laakiin ka Cabsan in Lugood saari doonaa heeso jir? Isku day iPad qalab music kala iibsiga. Waxaa nuqul MP3 aad iPad waxba laga badiyay. Read More >>
Wax macno ah ma taas iPad aad isticmaasho, waxaad hubin in ay dareemaan baahida loo qabo in ciyaaryahanka VLC. VLC ciyaaryahan, taas oo ay taageertaa ugu noocyada file warbaahinta, waxay noqon kartaa mid ah app waxtar leh oo dhab ah si ay kaaga caawiyaan in aad la furo warbaahinta kala duwan ee aad IP Read More >>
Ma doonaysaa in ay gurmad iPad hor casriyeeyo si macruufka? Way fududahay. Halkan waxaa ku qoran liiska 3 siyaabood in gurmad iPad ka hor la xariirta in macruufka 8. Read More >>
Ma waxaad doonaysaa qalab kala iibsiga telefoonka ah si ay u gudbiyaan HTC in ay iPad iyo qeybsanaan ku xigeenka? Eeg this article. Read More >>
Maqaalkani waxa uu muujinayaa inaad hogaanka 10-ada Transfer sawir u ah iPhone iyo iPad. Dooro mid ka mid ah in uu yahay waxa ugu haboon ee aad u. Read More >>
iPad Video Player: Watch Videos on iPad aan diinta
In this article, waxaan soo bandhigi doonaa saddex sooc iPad video ciyaartoyda. Oo weliba, Waxaan ku siin hab damaanad qaaday inuu kaa caawiyo inaad ciyaari videos on qalabka. Read More >>
Posted by James Davis | 15.10.2015
Si sawiro ka iPad wareejiyo iPad, waxaad isku dayi kartaa in iPad iPad kala iibsiga. Waxay awood u aad si ay u gudbiyaan sawiro in hab sahlan oo fudud. Read More >>
Ma doonaysaa in ay tirtirto iPad photos Roll Camera? Halkan waa barnaamij ballaaran. Sidaa daraadeed, waxaad tirtiri kartaa sawiro weyn ee ku giringiriya Camera on your iPad si degdeg ah. Read More >>
Iyada oo computer si iPad qalab kala iibsiga, waxaad si fudud video ka computer bedeli karaa iPad. Just tago waa uu akhrinayey. Read More >>
Sidee Waxaad ka iPad bedeli karaa Music inay iPod
La soo iibiyo songs qaar ka mid ah oo aad rabto inaad ka iPad wareejiyo music in iPod lagu wadaago? Halkan waxaanu kuu soo bandhigi laba siyaabood oo loo dhammayn lahaa in. Read More >>
Takhalusid music ka iPad in Dufcaddii ma noqon karo fudud marka aad isticmaasho Tababaraha iPad. Maqaalkani waxa aad ku hanuunin doonaa waxa ay samaynayaan tan Tababaraha iPad. Read More >>
Ma dooneysaa in aad u hagaagsan iPad tot computer cusub? Isku day inaad barnaamijkan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad sameeyo in aan laga badinin wax. Read More >>
Ma doonaysaa in ay gurmad iPad in drive dibadda u adag? Halkan yimaado ah iPad gurmad qalab, kuu gurmad music, video, sawiro, iwm iPad, waxa uu si fudud. Read More >>
Sida loo isticmaalo iPad sida An External Hard Drive
Software gelineya inaad isticmaasho iPad sida drive dibadda adag. Sidaa daraadeed, adiga iyo ka iPad wareejin karaan faylasha, tirto faylasha loo baahnayn, oo waxyaalo dheeraad ah. Read More >>
Waxaa jira 2 siyaabo fudud in ay tirtirto photos nuqul on iPad ee macruufka 7:. Tirtirto gacanta iyo tirtirto in Dufcaddii la qalab Read More >>
Posted by Emma Shaw | 13.10.2015
Sida loo Daawo Movies on iPad
Daawashada filimada ee iPad waa waayo-aragnimo cajiib ah. Laakiin sida uu u daawado filimada ee iPad? Sida loo sameeyo filimada la jaan aad iPad? Akhri si aad u hesho xal ugu fiican halkan. Read More >>
Sida loo Play Torrent on iPad (iPad 4 ka mid ah)
Tutorial waa tuse faahfaahsan oo ku saabsan sida loo badalo torrent in iPad on Windows iyo Mac, ka dibna aad u hagaagsan kartaa files torrent in aad iPad (iPad 3, iPad 4) si fudud. Read More >>
Sida loo hagaagsan iPhoto Sawiro / Photos in iPad
ay u guuraan sawiro ka iPhoto in iPad, labada aaladood iPhoto sawiro iPad la Lugood ama sawiro ka iPhoto wareejiyo iPad la Wondershare TunesGo (Mac). Read More >>
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPad in Android
Ma doonaysaa in ay beddelaan ka iPad in Android? Article waxay muujinaysaa sida loo maareeyo si ay u gudbiyaan music, video, sawiro, xiriirada iyo ka badan oo ka iPad in Android. Read More >>